lundi, 08 mars 2021 19:01
Antsirabe : Nasesin’ny jiolahy norobaina ny Central fiscal "B" sy ny Accès Banque
Ivontoerana mpikirakira vola miisa roa ao Antsirabe renivohitry ny Faritra Vakinankaratra no lasibatry ny fanafihana mitam-basy tao anatin’ny tapabolana. Vaky ny Central fiscal "B", ary vao ny marainan’ny zoma 5 mars, teo amin’ny ora fidiran’ny mpiasa, no voaroba ny Accès Banque Antsenakely. Vola 148 tapitrisa Ariary eo no voalaza fa lasan’ireo jiolahy niisa efatra nanao ny fanafihana ity banky ity.
lundi, 08 mars 2021 11:32
Bakalorea ankapobeny : Sokajy L, S, ary OSE indray manomboka izao
Vita hatreo ny sokajy A, C , D ho an'ny Bakalorea ankapobeny. Hanomboka amin’ity 2021 ity dia ho sokajy L (Littéraire) sy S (Scientifique) ary OSE (Organisation-Société et Économie) no hisafidianan’ny mpianatra, ho fampiharana ny naoty N°2019/358/MENETP/SG nivoaka ny taona 2019.
lundi, 08 mars 2021 08:21
RN31 : Antsohihy - Bealanana 129km
Potika ny fiara, vaky ny fitaratra, taritina tracteur, reraka ny mpamily sy ny mpandeha. 60 000ar ny saran-dalana Antananarivo - Bealanana, raha miala zoma amin'ny 12ora atoandro dia alahady amin'ny 4ora maraina vao tonga. Raha camion dia 3 andro no manala ny 54km lalan-dratsy sy gôdra. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 08 mars 2021 08:10
RN6 - 50Km hiditra an'Ambilobe avy Ambanja
RN6 - 50Km hiditra an'Ambilobe avy Ambanja (Jereo Sary Tohiny)
Tsikaritra tato ho ato fa misy fiakarany ny tahan’ireo mitondra ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara, araka ny tati-baovao nataon’ny avy eo anivon’ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Paik’ady apetraka manoloana izany ny fizarana CVO, ka any amin’ireo faritra ahitana fiakaran’ny taha no hanombohana izany, anisany ny eto Analamanga.
Sary Satelita 06 marsa 2021 - 10h30
Toetr’andro : Hivoaka an-dranomasina afaka fotoana fohy ao Mahanoro ny sisan'ilay androa ratsy. Mbola mitoetra any amin'ny faritra Avatra sy Avaratra-andrefanan'ny Nosy ny Talio. (Sary Satelita 06 marsa 2021 - 10h30)
RN1-bis Tsiroanimandidy - Maintirano Sary : César Mamizafy
Tontosa ny zoma 05 marsa ny fandraisana eo ambany fanevam-pirenena ireo Polisy monisipaly 100, ary mpamonjy voina 50, taorian’ny fiofanana narahin’izy ireo herinandro maromaro. Hiasa ho an’ny mponina sy ny tanànan’Antananarivo izy ireo hanatevin-daharana sy hifanampy amin’ny fandaminana ary ny fampandrosoana ny tanàna. Niara-nientana sy nifanome tanana tamin’ny fanomezana fanofanana ara-miaramila azy ireo ny Etat Major ny Tafika Malagasy, ny Tafika an-tanety, ny 3ème Régiment du Génie.
vendredi, 05 mars 2021 21:08
Aéroport Fascène Nosy-Be : Volamena 190,63 g tratra saiky havoaka an-tsokosoko
Nasisika tao anaty vatoaratry ny Power Bank ireo volamena 190,63 g tratra ireo. Lehilahy teratany karana iray handray zotra miazo an’i Addis Abeba omaly tolakandro no nitondra azy. Anatin’ny fanadihadiana ny raharaha amin’izao. (Jereo Sary Tohiny)
Page 14 sur 636